Ambassador Wharton Vokoshesha Nhoroondo yeZimbabwe
Ambassador Wharton at Naletale ruins
GWERU — Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, vanoti kuti pave nehukama hwakanaka pakati peZimbabwe neAmerica, zvakakosha kuti America iremekedze pamwe nekunzwisisa tsika nemagariro evanhu vemuZimbabwe.
VaWharton vakataura mashoko aya neChitatu muGweru apo pavakakumikidza chipo chemari inoita zviuru makumi matanhatu nezvina zvedhora kubazi reNational Museums and Monuments of Zimbabwe, NMMZ, muGweru.
Mari iyi iri pasi pechirongwa chehomwe yemumiriri weAmerica, Ambassadors Fund, uye ichashandisa kugadziridza madzimbabwe eNaletale National Monument iri pedyo neShangani kuMatabeleland South.
VaWharton vakati semumiriri wenyika yavo, basa ravo nderekuedza kuvaka hukama hwakasimba pakati pehurumende nevanhu venyika dzeAmerica neZimbabwe. Vakati mukuita izvi, zvakakosha kurumekedza nhoroondo yemagariro evanhu vemuZimbabwe panguva iyo nyika yange isati yapambwa nevachena.
Madzimbabwe eNaletale ari panzvimbo yechitatu mukukosha mushure memapopoma eVictoria Falls neGreat Zimbabwe.
Madzimbabwe aya, semamwe akawanda, anowanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, uye akavakwa nevaTorwa nevaRozvi vanove madzitateguru evanhu verudzi rweChiShona vari munyika.
Mukuru weNMMZ mudunhu reMidlands, VaNorbert Nhutsve, vanoti nzvimbo yeNaletale inzvimbo yakakosha munhoroondo yenyika.
VaNhutsve vanoti nekuda kwekuti nzvimbo yeNaletale iri mumapurazi aive evarungu, yange isingaziikanwi nevanhu vakawanda. Vanoti veNMMZ vane chirongwa chavanoita nevezvikoro chekuti vana vashanyire nzvimbo iyi nedzimwe nzvimbo dzakadaro senzira yekuti vakure vachiziva nhoroondo yenyika.
Vachitaura nevatori venhau mushure mechiitiko ichi, Ambassador Wharton vakataura zvakare kuti nyika yavo haina kugutsikana nekufambiswa kwakaitwa sarudzo munyika.
Vakaenderera maberi vachiti kunyange hazvo America isiri kubvisa zvirango zvayakatemera, vamwe vakuru vakuru vehurumende nemamwe makambani ane chekuita neZanu PF, vari kuramba vachibatsira Zimbabwe nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana.
VaWharton vakati kunyange hadzo nyika dzemu European Union dzakabvisa zvirango zvadzaive dzakatemera kambani yehurumende yeZimbabwe Mining Development Corporation, America ine maonero ayo yega panyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe inoti zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru veZanu PF zvinobatawo veruzhinji.
Asi America nedzimwe nyika dzekumadokero, kusanganisira Britain, dzinoramba izvi dzichiti dzine zvirongwa zvakawanda zvadziri kubatsira nazvo veruzhinji.
America ndiyo nyika iri pamberi mukubatsira Zimbabwe nemari inoshandiswa muzvirongwa zvakasiyana, izvo zvinosanganisira hutano, chikafu nedzidzo.